Isandi sikaLounge kaBazala Ozelweyo Otyunjelwe I-Forbes “Ngaphantsi kwama-30” | Iindaba ze-NAB | I-30 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » iindaba » I-Sound Lounge's Becca I-Falca Etyunjelwe Ukutyunjelwa I-Forbes "30 Ngaphantsi kwe-30"
I-YORK ENTSHA- Umvelisi omkhulu we-Sound Lounge u-Becca Fal Birth uphakathi kwabonyulwa ukuba babandakanywe kwi-Forbes yonyaka ye "30 Ngaphantsi kwe-30". Ukutyumba kuyaqhubeka kwizigaba ze20 ukuya ngeSeptemba 27th. Umntu ngamnye unokutyunjwa kaninzi. Abonyulwa baya kuvavanywa yiphaneli yeejaji kubandakanya oosasazo, abahleli kunye neengcali zeli shishini eziya kwenza ukhetho lokugqibela.
I-Forbes 30 Ngaphantsi kwe-30 yokuhlonitshwa kubandakanya iinkokeli ezincinci zesizwe kwi-media, iteknoloji, ukuzonwabisa, ezemali, imfashini, ukutya kunye ne-philanthropy. Kunyaka ophelileyo, iForbes ifumene ngaphezu kwe-15,000 amagama atyholwayo kwi-600 slots.
U-Falborn, i-29, waqeshwa njengomvelisi omkhulu kwisandi seLounge Lounge kulo nyaka, wamenza omnye wabaphathi abambalwa benkampani yezandi-enye yezomncinci. Kwindima yakhe yangoku, ulawula icandelo lokuthengisa elixakekileyo le studio nokubeka esweni iqela labavelisi bayo. Ukwanika ubudlelwane babathengi kunye nokuthengisa, kunye nokulawula iRounge Lounge Yonke indawo, iinkonzo zenkonzo ezikude zenkampani ezibonelela.
U-Falborn wajoyina i-Sound Lounge kwi-2017 njengoMvelisi kwaye waphakanyiselwa kuMvelisi oMkhulu kulo nyaka uphelileyo. Uvelise izwi ngokurekhodwa, uyilo lwesandi, kunye nokuxuba iiprojekthi ezininzi zentengiso, kubandakanya neendawo ezisixhenxe kwezisithoba eziveliswe yiSandou Lounge eyathi yakhukuliseka ngexesha lonyaka we-Super Bowl telecast. Umfundi ophumelele kwiKholeji yaseManhattan, uFalborn unemvelaphi kwimicimbi yeshishini, iinkonzo zabathengi kunye nentengiso, kubandakanya izikhundla ezidlulileyo kunye nendlu yee-Nice Shoes kunye ne-arhente yentengiso iHogarth kwiHlabathi liphela.
“Kulilungelo ukuqwalaselwa nabanye oosomashishini abasebatsha, abasunguli beenkokheli kunye neenkokeli,” utshilo u-Falazy. "Ukutyunjwa kwam kungumlinganiso womsebenzi omkhulu weqela kwi-Sound Lounge kunye nezinto ezintsha esizazisa kwisandi sasemva kwemveliso."
Malunga neLon Lounge
I-Sound lounge yindawo yokulalelwa kwemveliso yesikhokelo, ukubonelela ngeenkonzo zentengiso yeTV ne-rediyo, iifilimu, i-TV series, imikhankaso yedijithali, umdlalo kunye namanye amajelo asakhulayo. Ngokusekelwe kuManhattan, i-Sound Lounge ingumnini-mveliso kwaye usebenza. Landela Facebook, Twitter, LinkedIn kwaye Instagram Okanye u tyelele www.soundlounge.com kwiindaba zakamuva ze-Sound Lounge.
Thumela iNew York Alliance (PNYA) "Iposi yokuPhumla" Imikhosi "yeNOS4A2" Iqela leVFX - Oktobha 27, 2020
Ukugqitywa koMhleli kunye noNgcali wokuHamba koMsebenzi uSamantha Uber ujoyina iGoldcrest Post - Oktobha 26, 2020
Awards Ukusasazwa-SocialMeida UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli Isandi amabhaso esandi Imikhonto kunye neentolo I-Colonie - Iindaba BuTeknoloji I-Ultra HD Forum 2019-09-20
Previous: Phinda ulandule ulwazelelelo olubi ngokuvulekileyo ovela ku "Biza uSawule ongcono" ngeTitorial eNtsha evela kwiRed Giant
next: I-NAB bonisa iNqaku leNewcastle lePodcast yeNew York kunye neZabelo zePodcast eziKhethekileyo